RHCE Chiratidzo - Zvaungava Red Hat Certified Engineer - ITS
Chii chiri RHCE?
Chii chinonzi RHCSA?
Sei uchifanira kuwana Red Hat Certified Engineer Certification?
A Red Hat Certified Engineer, RHCE chiziviso ndiyo "flagship certification" kubva kuRud Hat. Icho pakati pemakore ekufambisa chiziviso chepamusoro uye chinokwanisa kuchengetedzwa neRed Hat Certified System Administrator (RHCSA) uyo ane kuwedzera kwekuziva, ruzivo, unyanzvi uye unyanzvi hunodiwa kubva kune mukuru mukuru wehurumende inotarisira Red Hat Enterprise Linux® (RHEL ) maitiro. RHCSA chiyeuchidzo ndicho chiyero chekupinda muchengeti wehurumende. Iwe unogona kuenda kuRHCE kana iwe wakadzidzira RHSCA uye wakagamuchira chiyeuchidzo chako.
Red Hat bhizimisi inopa mazano akasiyana ezvirongwa. RHCSA Chiratidzo ndechimwe chezvinyorwa zvinonyanya kuzivikanwa kubva kuRed Hat business. Red Hat inopa zviongororwo zvayo zvidzidzo chete mushure mekupedza chirongwa chekudzidzisa. Kudzidziswa kunoreva vese vadzidzisi veTI vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemasangano ari kuita mabasa anokosha ekubata Linux kusanganisira kuisa, kugadzira mitambo yehutano, kugadzirisa kuchengetedza muviri, nekuchengetedzwa kwekuchengetedza.
Kana iwe wakasarudza kuva RHCE, iwe unofanirwa kutsvaga Red Hat Website yekambani yekurovedza kudzidziswa iri pedyo neguta rako. Ipapo iwe unogona kutaurira hurumende uye unyoresa kuRHCSA. Kana uchida kubvisa muchengeti weRot Hat Certified Engineer, unofanirwa kuwana ruzivo rwezvinhu zvose zvepurogiramu yekudzidzisa pamwe nezvimwe zvinhu, sekugadzirisa kwekugadziriswa kwemagetsi. Mudzidzisi wekudzidzisa achakupa zvinhu zvokudzidzisa uye zvidzidzo zvemashoko akafanana. Iwe unogona kusarudza kuonekwa nokuda kweku Rede test yekuongorora maererano netsika yako yakarongwa. Zvirongwa zvekuedza zvinowanikwa pane imwe nzira yakachengeteka mune imwe nzvimbo yekuongororwa yakakodzera. Iwe unogona zvakare kutarisa maitiro akasiyana-siyana eRud Hat maitiro uye unogona kuronga zvirongwa zvako zvekuongorora.
RHCSAiyo inopinda-level yepamusoro inoongorora iyo inogadzirisa vashandi vanoda kuva nyanzvi ye Linux system vatungamiri kuburikidza nematambudziko anokosha ekutambisa mutsara uye zvimwe zvishandisi-yezvidzidzo zvepamusoro. Aya mazano anowedzera kuwedzera mu Red Hat System Administration II. Kuti uwane ruzivo rweRHSCA, vashandi vanofanira kupfuurira EX200, kuongorora kwemaawa e-2.5. Chikamu chiduku chokupfuura chekuongorora ndeche 70%.
Chidimbu chekuongorora kweRHCSA:
Raira mutsara mazano pfupiso
Dzidza kuiswa nekugadzirwa kwepurogiramu yepurogiramu uye zvikamu
Rongedza kupisa moto uye network network
Kutungamira & kutarisa matanho
Kuchengetedza nekudzora mafaira
Kutarisira vashandisi nemapoka
Kuti Uwane Linux mafaira edzimba
Kugadzira nekushandisa shanduro dzemagetsi
Kuongororazve Dhiyabhorosi yeMagetsi
RHCSA ndiyo "chiyero chekupinda" chiyeuchidzo chinokosha pakuva Red Hat Certified Engineer. RHCE Certification course ndeyevanjiniya, system administrators, vashandi vekushanda, kodzero yepamusoro nevashambadzi vegore uye vashandi vemabhizimisi, vane ruzivo pakushandisa RHEL mumigodhi yavo yeTI. Dzidzo inopa unyanzvi hunokosha uye inovimbisa kuti vatsva vanove vakachenjera muRHEL nekusimbisa pamashandiro ekuongorora zvidzidzo. Kuchenesa a Red Hat Certification kuongorora inopa mukana wezvenyanzvi kuti asvike kuRed Hat community, fomu yekudzidza-mapoka; kushanda pamwe chete pamapurogiramu uye kusvika kune vashandirwi.
Kunyange zvazvo dzimwe zviongororwa zvikumbiro zvinokumbira mibvunzo yakawanda-yekusarudza kana kuzadza-in-the-blank yevamwe teknolojia, kubvisa chero Red Hat kuongorora kunoda iwe kuti uite mabasa chaiwo enyika kuburikidza nekushandisa ruzivo rweRud Hat. Kunyange zvazvo pasina zvakatemwa zvinotarisirwa zvekambani iyi, chero ruzivo rwepakutanga mukushanda kwehurongwa hwekushandisa huchashanda zvikuru.